Sida loogu daro goobta sawir | War gadget
Qolka Ignatius | | Sawir, Tababarada
Taleefannada casriga ahi waxay ku guuleysteen dagaalka markii ay ku dumeen kaamirooyin dhaqameed dhaqameed, laakiin si sax ah uma ahan tayada, tayada sannadihii la soo dhaafay, iyo inta badan heerka ugu sarreeya, wax yar ama aan waxba ka hinaasi karin oo ay bixiso kamarad noocan oo kale ah . Sababta ugu weyni waxay ahayd raaxada.
Had iyo jeer waanu wadnaa casrigayaga casriga ah, markasta. Anaga oo wata, waxaan u wadnaa kamarad labada sawir iyo fiidyowba (kaamirooyinka ayaa ah badeecada kale ee imaatinkooda casriga ah ay arkeen suuqooda oo burburay). Iyada oo casriga ah, kuma qaadi karno oo keliya sawirro iyo fiidiyowyo meel kasta oo aan joogno, laakiin sidoo kale way noo oggolaaneysaa badbaadi goobta isku mid ah
Markii aan sawir qaadaneyno, iyo feylka aan abuurnay, xog taxane ah ayaa la keydiyaa, oo loo yaqaan 'EXIF', oo kaydinaysa ma aha oo kaliya soo-gaadhista, baaburka iyo qiimayaasha kale, laakiin sidoo kale, haddii aan kamaraddeenna u qaabeyno diiwaan xogta goobta, sidoo kale ku keydi.
1 Maxaan ku samayn karnaa xogtaas?
2 Kudar goobta sawirka on Mac
3 Kudar goobta sawir ee Windows
4 Kudar goob sawir ah iPhone
5 Kudar goobta sawirku ku yaal Android
Maxaan ku qaban karnaa eXog ma tihid?
Waad ku mahadsan tahay xogta goobta, waxayna kuxirantahay maamulaha sawirka aan isticmaalno, waan awoodnaa si dhakhso leh oo fudud u hel meesha aan sawirrada ka soo qaadnay, iyada oo aan loo baahnayn in loo beddelo iskuduwaha ku kaydsan meel cayiman.
Sannadihii la soo dhaafay, kaamirooyinka tayada leh, labadaba hummaag iyo muraayad la'aan, ayaa lagu daray hawshan, inkasta oo mararka qaarkood ay tahay qalab gooni ah oo ay tahay inaynu soo iibsanno haddii aan dooneyno inaan ku keydinno sawirradeena meel u dhow meel cayiman.
Haddii aad u malaynayso in la gaadhay wakhtigii lagu bilaabi lahaa kala-soocidda sawirradaada goobta, gaar ahaan haddii aad jeceshahay inaad safarto, markaa waxaan ku tusi doonaa sida aad ku dar goobta sawirada taas oo aan haysan, maxaa yeelay iyaga laguma samayn qalab bixiya shaqadan.
Kudar goobta sawirka on Mac
Si loo maareeyo sawiradeena Mac, haddii aan sidoo kale isticmaalno iPhone, dalabka ugu fiican ee aan ku hayno waa Fotos, waa codsi laga heli karo dal ahaan on macOS. Haddii aan rabno inaan ku darno meesha uu sawirku ka socdo Mac, waa inaan qabannaa tallaabooyinka soo socda.
Ugu horreyntii, waa inaan furnaa arjiga Sawirada iyo xulo sawirka taas oo aan dooneyno inaan ku darno macluumaadkan.
Markaan xulano sawirka, waa inaan tagnaa liiska kore ee arjiga oo aan gujino (i) illaa marin u hel sifooyinka muuqaalka. Qaybtani waxay muujineysaa xogta EXIF ​​ee sawirka, oo waliba ay ku jiraan meesha haddii la heli karo.
Feedh ku jiro Meel u yeel waa inaan qornaa meeshii lagu sameeyay, xaaladdan waa Novelda. Si otomatig ah, sida aan wax u qoreyno, xulashooyin kala duwan ayaa la muujin doonaa oo aan kala dooran karno.
Mar, waxaan helnay magaca goobta, waa inaan helnaa oo keliya garaac galaan. Marka xigta, magaca magaalada aan dooranay waa lasoo bandhigi doonaa iyadoo lala socdo khariidada goobta ay ku taallo.
Si loo hubiyo in arjiga uu aqoonsaday goobta cusub ee aan ku darnay sawirka, kaliya waa inaan isticmaalnaa ikhtiyaarka Maktabada Sawirka> Meelaha oo ka hel sawirka meesha aan dhignay.
Kudar goobta sawir ee Windows
Nasiib darrose, oo ka duwan macOS, Windows 10 nama siiso wax hab ah oo aan ku darno goobta sawirradeena, taas oo nagu qasbeysa inaan u adeegsanno codsiyada dhinac saddexaad. Codsiga bixiya natiijooyinka ugu fiican ayaa la yiraahdaa GeoPhoto - Geotag, Khariidad & Muqaal. GeoPhoto waa codsi aan ku soo dejisan karno bilaash, oo aan ku dari karno kaliya goobta illaa saddex sawir.
Haddii aan dooneyno inaan sii wadno isticmaalkeeda si aan ugu darno goobta sawirro badan, marka lagu daro ka faa'iideysiga inta ka hartay howlaha ay na siiso (ka hel sawirrada khariidad ku saleysan meesha ay ku yaalliin), waa inaan tag goobta wax lagu iibsado oo bixi 5,99 euro way ku kacaysaa. Hadda oo aan ku caddaynay codsigeeda, waxaan ku dari karnaa goobta sawirradeenna Windows 10, waxaan ku tusaynaa tillaabooyinka la raacayo.
Mar alla markii aan ka rakibnay barnaamijka Windows Store, waxaan doorannaa sawirka ama sawirrada aan dooneyno inaan ku darno meesha, gujie badhanka saxda ah waxaanan ku furaynaa GeoPhoto.
Marka xigta, waa inaan geli goobta sawirka in aan ku soo xulnay sanduuqa kore oo aan ka xulanno xulashooyinka ay na siiso, oo ah midka u dhigma goobta. Ugu dambeyntiina, waa inaan keydinaa goobta sawirka, iyadoo loo marayo badhanka keydka ee ku yaal qeybta midig ee hoose ee sawirka.
Si loo hubiyo in goobta si sax ah loo keydiyay, kaliya waa inaan dib ugu furnaa arjiga sawirka aan hada ku isticmaalnay check sida tan loogu muujiyo khariidada, adeegsiga goobta aan ku darnay.
Ka soo degso GeoPhoto Windows Store
Kudar goob sawir ah iPhone
Dukaanka App waxaan ku haynaa codsiyo kala duwan oo noo oggolaanaya inaan la shaqeyno xogta EXIF ​​ee sawirradeena, si kastaba ha noqotee dhammaantood ma ogola inaynu ku darno goobta sawir ka soo qaad qalabka.
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee laga heli karo App Store ee na siiya shaqadan ayaa ah EXIF Daawade.
Haddii aan rabno inaan ku darno goob sawir si toos ah uga socota iPhone-ka oo leh EXIF ​​Viewer, waa inaan sameynaa talaabooyinka xiga:
Marka aan furo arjiga, waa inaan xulo sawirka taas oo aan dooneyno inaan ku darno goobta.
Marka xigta, waxaan tagnaa liiska hoose ee sawirka oo guji Tafatir EXIF.
Daaqada xigta, waxaan aadeynaa xagga hoose, gudaha Goobta, dhagsii muraayadda weyneyso si ku qor magaca magaalada meeshuu joogo, isbedel ayaan ku dabaqnaa waana intaas.
Kudar goobta sawirku ku yaal Android
Ciyaarta waxaan ku leenahay meesha aan ku hayno Codsiga Tifatiraha Sawirka 'EXIF', oo ah codsi, sida magaciisu tilmaamayo, noo oggolaanaya tafatir xogta EXIF ​​ee sawirada, ama in lagu daro xog cusub ama la tirtiro kuwa jira. Si loogu daro goobta sawirka Android oo leh Tifatiraha Sawirka EXIF ​​waa inaan ku dhaqaaqnaa talaabooyinkan:
Ugu horreyntii, mar alla markaan furno arjiga, waa inaan gujino Baadh oo raadi sawirka aan dooneyno inaan ku darno xogta EXIF.
Marka xigta, tifaftire ayaa furi doona meesha aan wax ka beddeli karno dhammaan xogta aan dooneyno. Xaaladdayada, waxaan gujinnaa Geolocation.
Marka xigta, khariidad ayaa la soo bandhigi doonaa halka ay tahay inaan ku aasaasno halka ugu dhow sawirka. Marka biinanka leh meesha uu yaalo, dhagsii astaanta ansaxinta ka dibna kaydso astaanta lagu muujiyay isla booska.
Markaan kaydino sawirka goobta, xogta EXIF ​​ee sawirka markale ayaa lasoo bandhigi doonaa leh goobta aan ku xulnay.
Tifatiraha sawir exif
Developer: Studio Studio
Tifatiraha Sawirka Exif Pro
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Sawir » Ku darista goobta sawir